जनयुद्ध – Himalaya Television
१६ फागुन २०७७ जाजरकोट । अभिभावकको माया, स्नेहमा बस्न कसलाई पो मन हुँदैन र ? आफन्तले दिने सल्लाह अनि दिशानिर्देशबाट भावी कार्यसम्पादन गर्ने रहर नभएको को होला ? जनयुद्धकालमा बेपत्ता बनाइएका शिक्षक अहिले २० वर्षसम्म कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने परिवारलाई...
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह आज जनयुद्ध दिवस मनाउँदै
१ फागुन २०७७ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आज देशभर जनयुद्ध दिवस मनाउने भएको छ । जनयुद्ध दिवस मनाउन केन्द्रीय कार्यालयबाट सबै जिल्लामा सर्कुलेसन गरिएको छ । सहिद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रमको ब्यानरमा आफ्नो...